Malunga nathi -Xuzhou QLT Trade Co., Ltd.
MASTER GLASSMAKER: VIRTUOSITY, INKOSI YOKUZIPHATHA NOKUYILA
Umenzi webhotile yeglasi yobungcali
ngenani elikhulu lamagcisa anamava kunye nabanezakhono kunye nabaphathi. Inkampani iyaqhayisa ngemisebenzi ekhethekileyo, ekrelekrele kunye nabaselula. Ukhuphiswano. Ukugxadazela kunye nokuNgxolisa ", isikhokelo somgangatho sithi: AKUKHO Okuhle. 15.11 Setha tor. Ukwaneliseka kwabaThengi kunye nokuGcina ukuPhuculwa '. Njengendlela yokugcina izinto. Injongo yabo bonke abasebenzi abasebenza kumzi-mveliso wethu kukuphuhlisa ibeyimodem yesayizi ye-5g ulawulo kunye nezixhobo zeteknoloji eziphambili!
Umzi-mveliso wethu ubambe iSOS. COO. Ukuhlolwa okungenayo kunye nokuvalelwa yedwa, kunye nelungelo lokurhweba kwi-bade yangaphandle. Umoya wokwenza izinto ezintsha, ukuhlola, ukhuphiswano, umzabalazo kunye nophuhliso ngumgaqo-nkqubo osemgangathweni othi "ungazami ukufumana eyona nto intle, uzabalazela i-perfecto, ulwaneliseko lwabathengi kunye ne-excellon,".
ILIFA LEMVELI ELIBALULEKILEYO KUNYE
Ukusuka kumbala otyheli, okhazimlayo umbala wesafron, igobhu enyibilikayo yeglasi ye-incandescent igudla kamnandi ukuze ibethwe kwaye ibunjwe. Sise-xuzhou yase-china, kwilali ye-liuxin, ethiywa igama ngenkulungwane ye-15 "iGlass Village" *. Apha, ngaphezulu kwenkulungwane, ilali yakhula, yahlala kwaye yanwenwa kwihlabathi ngenxa yobungcali obukhethekileyo bokwenza iiglasi eziye zadluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana.
Beqhutywa luthando nothando lwale nto ikhethekileyo, aba benza iiglasi abaphambili baye bakwazi ukufumana nokudlulisa ulwazi lwabo ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana, njengoko inkqubela phambili yetekhnoloji kunye nobuchule busanda.
Iglasi yinto ephilayo, apho ukuveliswa kwezinto ezifanayo kungasoloko kuphunyezwa. Ukubumba kubeka izinto ezingazinzanga phantsi koxinzelelo olukhulu, ezinokubangela ukungafezeki ngamanye amaxesha kuyo yonke inkqubo yokuvelisa. Kwaye okwangoku, ikwayile nto inye yemilingo, evuthayo kunye neyobushushu yokuba abantu baseQLTGLASS babenolwazi ngokugqibeleleyo kulwazi lwabo olwahlukileyo.
Ngumsebenzi oshushu ophethe iglasi etyhidiweyo. Egcinwe ngumngundo, abenzi beglasi bajonge ngononophelo kwi-gob enyibilikileyo kwaye bayibeka iliso kwinkqubo yokuvelisa ukuyiguqula ibe yibhotile enye. Yinkqubo enomdla, eqhutywa ziingcali zegilasi ezidibanisa ngobuchule kunye nokulunga ukuze kuqinisekiswe iibhotile ezifanayo ezingenasiphako. Ulawulo lomgangatho olungqongqo lulandela, uqinisekisa imveliso esemgangathweni, umgangatho oqinisekileyo kunye nokwoneliseka kwabathengi
Olu thungelwano kunye nobuchwephesha bemveli bokwenza iiglasi, obwahlukileyo emhlabeni, buyenza ukuba inike awona magama makhulu kwiziqholo, izinto zokuthambisa kunye nemimoya ubuchwephesha behlabathi obufunyenwe kwisithethe kunye nobunkunkqele kunye nokunethezeka "okwenziwe e China".